भिडियो: अर्घाखाँची दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी के भन्छन् ? स्थलगत रिपोर्ट – Gulminews
Home/भिडियो/भिडियो: अर्घाखाँची दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी के भन्छन् ? स्थलगत रिपोर्ट
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ मंसिर १२, बिहीबार १७:५२ मा प्रकाशित
अर्घाखाँची, मंसिर १२ । अर्घाखाँचीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने १९ जनाकै परिचय खुलेकाे छ । सन्धिखर्क नगरपालिका–६ नरपानीमा बुधबार बेलुकी बस दुर्घटना हुँदा गाडी धनी सितगंगा नगरपालिका–२ का सन्तबहादुर बस्नेत र चालक कपिलवस्तुका बसन्त भनिने ओमबहादुर थापासहित १९ जनाको ज्यान गएको थियाे ।
दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी के भन्छन् ? हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट: